दमकमा एकदिन अघि पछि बाबु छोराको मृत्यु ! - Limbuwan khabar
दमकमा एकदिन अघि पछि बाबु छोराको मृत्यु !
सोमबार, ०३ कार्तिक, २०७७ दिउँसोको ०३:५० बजे, लिम्बुवान न्युज
दमक। झापाको दमकमा बाबुछोराको चाैविस घण्टा अघिपछि मृत्युभएको छ । दमक २ निवासी आरवी थापा र उनका बुबाको एकदिन अघिपछि मृत्युभएको हो ।
दमकका सामाजिक व्यक्तित्व साथै दमक जेसीजका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका औषधी व्यवसायी ५१ वर्षीय आरवी थापाको सोमबार र उनका ९१ बर्षिय बुवा खड्गबहादुर थापाको आइतवार मृत्युभएको हो । थापाले दमक चौंकमा लामाे समय देखि दर्पण फार्मेसी सञ्चालन गरिआएका थिए ।
करिब २ साता अघिदेखि फोक्सोमा समस्याका कारण विराटनगरस्थित नोवेल अस्पतालमा उपचाररत उनको सोमबार मृत्यु भएको हो । चिकित्सकहरुले विरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुने सम्भावना नदेखेपछि भेन्टिलेटरबाट निकालेर घरतर्फ ल्याउने क्रममा बाटोमा नै मृत्यु भएको बताइएको छ ।
यसैगरि मृतकका बाबु खडग बहादुरको आईतबार करिब साढे ३ बजे तिर घरैमा र बाबुको मृत्यु भएको २४ घण्टा भित्रैमा छोरा आरवीको पनि सोमबार दिउँसो करिब ३ बजे मृत्यु भएको थियो ।